China Amphibious Undercarriage ụlọ ọrụ na ndị na-eweta ngwaahịa | Bonovo
A na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta amphibious ka ọ rụọ ọrụ na mpaghara mmiri, mmiri mmiri, mmiri na-emighị emi na ala ndị dị nro nwere ike ịse n'elu mmiri. BONOVO a haziri nke ọma amphibious pontoon / undercarriage ka n'ọtụtụ ebe na n'ụzọ dị irè etinyere maka wepụ silty ụrọ, na-ekpocha silted trenches, wepụ osisi, swampland na-emighị emi mmiri ọrụ ebe omenala ọkọlọtọ excavators nwere ókè.
Na BONOVO amphibious ponton / undercarriage, anyị egosila na anyị bụ ndị ahịa nwere arụmọrụ dị mma na mpaghara ndị a:
1) Ala apịtị na-ekpocha na ebe a na-egwupụta akụ, ebe a na-akọ ihe na ebe a na-ewu ewu
2) Mweghachi na Wetland Wetland
3) Mgbochi na ịchịkwa idei mmiri
4) Ntughari mmiri
5) Ntughari nke saline-alkali na ala di ala
6) Omimi nke kanaal, uzo mmiri na onu mmiri
7) Ikpocha nke ọdọ mmiri, ụsọ mmiri, ọdọ mmiri na osimiri
8) Igwu ala trenchi maka mmanu mmanu na ikuku
9) irgba mmiri mmiri
10) Ala odida obodo na eke gburugburu mmezi
Onye Ọkachamara Ọkachamara nke Ngwaahịa Amphibious
He Spud na Hydraulic Mechanism jikọtara na osote pontoon mechiri emechi, nke arụnyere n'akụkụ abụọ nke ngwupụta amphibious. Enwere ike iji ike hydraulic iji chịkwaa ntụgharị ihu ma ọ bụ elu. A na-ekpebi ogologo ya site na omimi nke mpaghara ọrụ. A na-ewu spuds mgbe ọ na-arụ ọrụ, wee tinye ya n'ime apịtị site na usoro hydraulic. Ojiji nke spuds ga-eme ka nkwụsi ike nke ngwa ọrụ rụọ ọrụ nke ọma na mmiri.
Ihe eji eme Pontoon bụ nke ihe eji eme ihe pụrụ iche AH36 na 6061T6 alloy alloy nwere nnukwu ike. Usoro mgbochi na-egbochi sandblasting na égbè-ọgbụgba ọkụ na nkà na ụzụ, nke na-eme ka ndụ ojiji dịkwuo mma.
Ezi uche bughi nhazi na nwere oke
mmewere mmewere na saịtị na-ebibi ule hụ na eburu ikike na nchekwa nke Pontoon.
Pontoon Retractable bụ ihe pụrụ iche nke BONOVO Amphibious Undercarriage. Ọ pụtara na anya nwere ike gbanwee na-akpaghị aka n'etiti pontoon abụọ na ụfọdụ nso. Ogwe ndị a kwadebere na usoro nchịkwa hydraulic, dị mfe ịrụ ọrụ na nchekwa dị elu. Mgbe a na-arụ ọrụ, ọ bụrụ na ọnọdụ arụ ọrụ dị warara, a pụrụ ibelata pontoons dị n'etiti etiti oge ị na-arụ ọrụ. Na ọrụ nke oghere ukpụhọde, anyị nwere ike inyere welie Chassis kwụsie ike ma melite ọrụ arụmọrụ nke ndị ahịa.
Mgbe agbụ ahụ ejiri oge ụfọdụ, ọkwa ahụ ga-abawanye n'ihi iyi nke pin bushing, nke ga-eme ka eriri ahụ niile toro ogologo ma mekwaa ịwụfu ma ọ bụ na-amị amị mgbe ọ na-eje ije. Ọ ga-emetụta ọrụ ahụ nke ọma. Ngwaọrụ na-eme mkpọtụ nwere ike hụ na agbụ igwe na ezé ezé na-arụ ọrụ nke ọma site na ịhazi ọnọdụ nke oghere. Mkpọchi bolt bụ nhazi ọkọlọtọ nke pontoon anyị. Cilinda tightening dị mfe karịa bolt tightening, nke nwere ike ime ka nguzozi itule ma hụ na enwere ike na ịrụ ọrụ nke ọma na-eje ije.
Ikpochapu ala apịtị na ebe a na-egwupụta akụ, ihe ọkụkụ na ebe a na-ewu ala Wetland mweghachi na ndozi
Mgbochi na njikwa ide mmiri Ihe oru ngo mmiri Mgbanwe nke saline-alkali na ala dị ala Mmilata ọwa mmiri, ọwa mmiri na ọnụ mmiri Ikpochapụ Ọdọ, ọdụ ụgbọ mmiri, ọdọ mmiri na osimiri
Igwu ala trenchi maka mmanu mmanu na mmanu gas
ogbugba mmiri n'ubi
Slọ odida obodo na mmezi gburugburu ebe obibi
20T Amphibious Excavator oke
Nke gara aga: S usoro
Osote: Track bolts na nkpuru
amphibious haịdrọlik undercarriage
excavator n'okpuru ụgbọ ala maka ọrịre
excavator n'okpuru akụkụ
excavator undercarriage akụkụ ndị na-eweta ya
mini excavator okpuru
undercariage excavator akụkụ
Track bolts na nkpuru